Waxaa lagu qiyaasaa in Apple ay keydin doonto 2.500 milyan oo doolar iyadoo lagu beeri doono M1 chip | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxaa lagu qiyaasaa inuu badbaadin doono $ 2.500 bilyan isagoo hirgelinaya M1 chip
Waxay u muuqataa inay tahay shalay markii Apple ay dunida u soo bandhigtay M1 chip-ka lagu tagi doono Mac-yada cusub. Apple Silicon wuxuu matalayaa mustaqbalka Mac-yada Apple iyo dhamaadka Intel, in kasta oo Tim Cook uu horay u cadeeyay in tani runti aysan aheyn tan jidka, laakiin si dhakhso leh, waxaan arki doonaa sida Intel looga waayo nolosha dadka adeegsada tufaaxa. Adeegsiga Chips-yada cusub ayaa shirkadda a keydka suurtagalka ah ee qiyaastii $ XNUMX bilyan sida uu sheegay IBM.
Falanqeyn ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda IBM ayaa soo jeedinaysa in ku baddalka Apple ee M1 Chips ay shirkadda ka badbaadin doonto qiyaastii $ 2.500 billion sanadkan. Caqli ahaan keydintan ayaa kori doonta sida aan u aragno sida abuurista jabkan loogu darayo moodooyin badan, illaa jiritaanka dhammaantood la dhammaystiro.
Daraasaddan waa in lagu qaataa iniin cusbo ah. Kuwani waa qiyaaso, maadaama Apple aysan daabicin qiimaha la xiriira isticmaalka Chips-yada cusub sidaa darteedna ma ogaan doonno dhab ahaan wadarta keydku. Si kastaba ha noqotee, khubarada mowduucani waxay isku raacsan yihiin in qiyaasahani ay ku dhow yihiin xaqiiqda waana ay u badan tahay inay u dhowdahay tirooyinkani. IBM fulinta wuxuu qiyaasayaa in soosaarida Chipsiyada M1 ay Apple ku kici doonto inta udhaxeysa 40 iyo 50 doolar. Illaa iyo hadda, illaa $ 200 ayaa lagu kharash gareeyay processor-ka Intel Core i5 ee MacBookga, iyo in ka badan oo loogu talagalay nooca uu qaado MacBook Pro.
Xisaabintu waa mid aad u fudud, labadaba in la sameeyo iyo kuwa aad xisaabta ku darsatay si aad u hesho tiradaas guud. Sidaa awgeed Kharashaadka waxaa laga yaabaa inaysan ahayn waxaad isticmaaleysid, laakiin sidaan horay u sheegnay, uma muuqato inay aad uga fogaan doonto tirada dhabta ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxaa lagu qiyaasaa inuu badbaadin doono $ 2.500 bilyan isagoo hirgelinaya M1 chip
Apple TV + wuxuu helayaa xuquuqda filimka "Tetris"